उम्मेदवारले नै गरेनन् मतदान - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
उम्मेदवारले नै गरेनन् मतदान
- अर्जुन राजवंशी, दमक
- झापा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार राम कार्कीले मतदान गरेनन् । पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीले आफ्नो नामावली भएको काठमाडौंमा गएर मतदान नगरेका हुन् ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट झापा १ मा उम्मेदवार बनेका कार्कीको नामावली काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा रहेको छ ।
मतदानको दिन आफु उम्मेदवार भएको क्षेत्र घुम्नु परेकोले मतदान गर्न काठमाडौं जान नसकेको उम्मेदवार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘मेरो उपस्थिति मतदाता माझ हुन जरुरी थियो । त्यसैले म काठमाडौं जान भ्याइँन ।’ उनले कार्यकर्ताको आग्रह अनुसार पनि आफू काठमाडौं नगएको बताए । कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मैदानमा छन् । ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा बाम गठबन्धन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभातर्फ एउटा मात्रै क्षेत्र झापा १ बाट उम्मेदवारी दिएको हो ।
उनका प्रतिस्पर्धी शर्माले भने बिहीबार बिहान ८ : १५ बजे निर्वाचन क्षेत्रभित्रको मेचीनगर नगरपालिका १ स्थित कविशिरोमणी माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका थिए । यस्तै कांग्रेस पूर्व महामन्त्री एवं झापा ३ का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाले भद्रपुर १० स्थित कलबलगुडी प्राथमिक विद्यालयमा रहेको केन्द्रमा मतदान गरेका थिए ।
सिटौलाले आफ्नै गृहनगरमा मतदान गरेपनि उनको मत आफ्नो लागि भने प्रयोग नहुने भएको छ । कलवलगुडी मतदान केन्द्र झापा क्षेत्र नं. १ मा पर्दछ । सिटौलाका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले आफु उम्मेदवार भएको क्षेत्रभित्र पर्ने हल्दिबारी गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयमा रहेको केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई मत दिन पाएनन् । उनले झापामा नभई भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति माविमा रहेको केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
गृहजिल्ला झापा भएपनि बसाई सरेर भक्तपुर गएपछि ओलीले पछिल्ला चुनावमा भक्तपुरबाटै मतदान गर्दै आएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत खिलनाथ रेग्मीका अनुसार जिल्लामा ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । जिल्लाका सबै ६ सय ९२ वटै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भएको उनले बताए ।